Mbelata ibu nke akwụkwọ akụkọ United Airlines echekwala ihe karịrị 600.000 lita mmanụ | Akụkọ akụrụngwa
Mbelata ibu nke magazin ndị United Airlines echekwala ihe karịrị lita 600.000 mmanụ
Obere mgbanwe ndị ụgbọ elu na-eme iji nwaa iwelata naanị mmanụ ọkụ kamakwa ụgwọ nke ụgbọ elu ọ bụla, hụrụ n'otu n'otu, ọ dị ka enweghị uche, ma ọ bụrụ na anyị etinye ha na ụgbọ elu niile nke ụlọ ọrụ ahụ nwere na ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu ha na-arụ kwa afọ, obere mgbanwe ndị a nwere ike ibute oke nchekwa mmanụ.
Na 1987 American ụgbọ elu kpebiri wepu oliv na menu niile nke ụgbọ elu na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, Mbelata nke chebere ụlọ ọrụ $ 40.000 kwa afọ. Afọ 20 mgbe nke ahụ gasịrị, otu ụlọ ọrụ ahụ, na mbọ ya ịbelata ịdị arọ nke ụgbọ elu ya, gbanwere trolleys niile maka ihe ọ drinksụ drinksụ na nri maka ndị nwere ọkụ nke ha ji chekwa ibu 200 n'arọ na ụgbọ elu ọ bụla.
Companylọ ọrụ ikpeazụ na-anwa ibelata ịdị arọ nke ụgbọ elu ya, n'oge ahụ ọ dị ka ọ ga-aga nke ọma, bụ United Airlines, ụgbọ elu na ị gbanweela akwụkwọ ị ji ebi akwụkwọ nke gụnyere na ụgbọ elu niile na maka ndị njem niile, na-ebelata ịdị arọ ya site na 3 gram. Mana dịka m kwuru na mbido isiokwu a, anyị ga-ewepụta data ndị a na ndị ọrụ ụgbọelu niile.
Dabere na Los Angeles Times, ekele maka akwụkwọ ọkụ ọkụ ụgbọ elu na-eji ugbu a, ha jisiri ike belata ịdị arọ nke ụgbọ elu ha, nke sụgharịrị ịbụ ego nke $ 640.000 mmanụ mmanụ kwa afọ, nke echekwa $ 290.000. Dị ka anyị nwere ike ịgụ na Los Angeles Times, ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ ihe dị ka ụgbọ elu 4.500 kwa ụbọchị gburugburu ụwa, kewara n'ime ụdị ụgbọ elu dị iche iche nke nwere ikike njem sitere na 50 ruo 366. Otu ụlọ ọrụ ahụ, n'afọ gara aga kwụsịrị ire ngwaahịa na-enweghị ọrụ na ụgbọ elu, na-echekwa ihe karịrị $ 2,3 na mmanụ ụgbọala.
Afọ ole na ole gara aga, ụlọ ọrụ ndị dị ọnụ ala, iji gbalịa ibelata oriri nke ụgbọ elu ha dị ka o kwere mee, jiri usoro dị ize ndụ nke itinye mmanụ dị gị mkpa iji ruo ebe ị na-agaN'ụzọ dị otú a, mgbe ha na-ekwupụta na ha ga-eji mmanụ dị ala, ha nwere mmasị mgbe niile mgbe ha rutere n'ọdụ ụgbọ elu, ebe ihe doro anya kpughere iwe nke ndị ọkwọ ụgbọ elu nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ. N'ụzọ dị otú a, ha zeere ịdọ aka ná ntị ahụ ike ụbọchị, mgbaàmà mberede nke na-enye ha ihe kacha mkpa na ala mana nke ahụ gụnyere nyocha iji chọpụta ihe bụ ihe mgbama mgbaàmà ahụ.
Ọ dabara nke ọma, ruo nwa oge ugbu a, ndị isi na-achịkwa iwu na-amanye ụlọ ọrụ niile ka ha jiri mmanụ ụgbọ ala ha buru mmanụ ha ga-erute ebe ha na-aga, kamakwa enwekwara ike ịga njem n'ọdụ ụgbọ elu ọzọ, ọ bụrụ na isi mmalite ahụ anaghị arụ ọrụ n'ihi ọnọdụ ihu igwe ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Mbelata ibu nke magazin ndị United Airlines echekwala ihe karịrị lita 600.000 mmanụ
Nokia 10, igwe mkpanaka nke nwere lens 5 n’azụ igwefoto?